အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: သွားဖြစ်ခဲ.သော ၂
ဒီနေ.ရုံးက Training သွားရတယ်လေ ၊၊ ၂ ရက် သွားရမှာ ၊၊ ဒီနေ.ရယ် ၊ မနက်ဖြန်ရယ် ၊၊ Training သွားရတာ တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ ဗျာ၊၊ ကျွန်တော် အင်မတန်သွားချင်နေတဲ.နေရာလေးတစ်ခုကို သွားခဲ.ရတယ်၊၊ ရုံးကို ပြန်ပြောပြနဲ.နော် ... ဟီ ဟိ၊၊ Lunch Time Break ပေးတဲ.အချိန်လေး သွားတာပါဗျာ ၊၊ သင်တန်းအတူတူတက် ရတဲ. သူငယ်ချင်း ဦးလေးကြီး လိုက်ပို.ပေးတာ၊၊ ဦးလေးကြီးရေ ကျေးဇူးပါဗျာ......၊၊
ဒီနေ.သွားဖြစ်ခဲ.တဲ.နေရာလေးတစ်ခုကို ခေါ်သွားချင်လို.ပါ၊၊ ကျွန်တော် သွားချင်ခဲ.တာ စင်္ကာပူကို စရောက်တည်းကပဲ၊၊ ဒါပေမယ်.မသွားဖြစ်ခဲ.ဘူး၊၊ နောက်တော.မေ.သွားတာရယ် ၊ မကြုံဖြစ်တာရယ်နဲ. မရောက်ဖြစ်ခဲ.တာ၊၊တချို.လည်း သိလိမ်.မယ်ထင်ပါတယ်၊၊ စင်ကာပူ ကျွန်းစောင်.နတ်မင်းကြီး နတ်နန်း နဲ. နှစ်ပေါင်းသက်တမ်းကြာပြီဖြစ်တဲ. ညောင်မုတ်ဆိတ် ပင်ကြီးပါ၊၊
ဒီထက်ပိုပြီး Information ပေးချင်ပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ.ဦးလေးကြီး ပြောတဲ.ဘာသာစကားက ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျာ ၊၊ နောက်ထပ်ကြိုးစားပြီး စုံစမ်းပြီး ထပ်တင်ပေးပါအုံးမယ်၊၊ Edit နဲ.ပဲ Photo လည်း ထပ်တင်ပါအုံးမယ်၊၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တပေါင်းလပြည်.နေ. ကျွန်တော်.လက်ဆောင်လေး အဖြစ် ပေါ.ဗျာ၊၊
ဆုတောင်းပြည်.တယ်တဲ.၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သွားချင်သူတွေ အတွက် နတ်လမ်းညွှန်ပါ ဗျာ၊၊
Toa Payoh Mrt မှာဆင်း နောက် Exit C ကနေထွက် လိုက် ၊ နည်းနည်းလေး ဆက်လျှောက် ရင် ရောက် ရောဗျာ၊၊
Toa Payoh Mall ဘက်မမြင်ရသော ညောင်ပင်ကြီး
ညောင်မုတ်ဆိတ် ပင်ကြီး နှင်.နတ်နန်း
ံ့မြတ်စွာဘုရားရုပ်ထုနှင်. ကွမ်ရင်မယ်တော် ရုပ်ထု
လေးမျက်နှာ ဘုရား (Four Faces Pagoda )
ဒီနေ.တပေါင်း လပြည်.နေလေ ၊၊ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင်တော. ရွှေတိဂုံဘုရား မှာ တပေါင်းပွဲတော်ကြီး စည်နေရော.ပေါ.၊၊ ဒီကနေပဲ မှန်းပြီး ဘုရားဝတ်ပြုလိုက် ကြတာ ပေါ.ဗျာ၊၊
... 6:41:00 PM
10 March 2009 at 9:12 PM
20 June 2009 at 8:32 AM
သွားလိုက်ပါ ကိုဒီပရေ ၊ ကောင်းတဲ့လမ်းပဲ P:
မမေ : ဟာဟ အခုတော့သိသွားပြီ မဟုတ်လား ၊၊ မှန်၏ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း စလုံးမလေးဆို ဘာမှ မသိဘူး ၊၊ ကျွန်တော် က သူကို့ အမြဲစတယ် ဘုရားစူးစင်ကာပူရမ်း လို. အဟုတ် ဘာမှမသိတာနော် ၊၊ ကျောင်းတက်ရတာ ကိုး ၊၊ ကျွန်တော်တို.က ပိတ်ရက်ဆို အိမ်မှာ ပျင်းတော့ လျှောက်ပြီး ဂျလန်း ဂျလန်း နေကြတာလေ ၊၊
20 June 2009 at 10:06 AM